Motio's Cloud Zvakaitika - Motio
by John BoyerApr 20, 2022gore, Uncategorized0 mashoko
Izvo Kambani Yako Inogona Kudzidza Kubva Kubva Motio's Cloud Zvakaitika
Kana kambani yako yakafanana Motio, unotova nedata kana maapplication ari mugore. Motio yakatamisa application yayo yekutanga mugore gore ra2008. Kubva panguva iyoyo, tainge tawedzera mamwe maapplication pamwe nekuchengetedza data kumakore. Hatisi hukuru hweMicrosoft, Apple, kana Google (zvakadaro) asi isu tinofunga kuti ruzivo rwedu negore rwakafanana nemakambani mazhinji. Ngatimboti kana iwe uri kambani inogona kutenga yako gore, ungasada chinyorwa ichi.
Kungofanana nekuziva nguva yekutenga kana yekutengesa mumusika wemasheya, zvakakosha kuziva nguva yekutamira kune gore. Motio yakatamisa maapplication ayo ekutanga kumakore kumakore a2008. Takatamisa makiyi maapplication akati wandei uye kukurudzira kwakasiyana zvishoma pane chimwe nechimwe. Iwe unogona kuwana, sezvatakaita, kuti sarudzo inowanzoenderana nekwaunoda kudhirowa mutsara wemutoro uye kutonga pakati pako nemutengesi wako wegore.
Iyo yakakosha yekukurudzira kutamira kune gore neyedu accounting software yaive mutengo. Zvaidhura kushandisa Software-se-sebasa pachinzvimbo chekutenga maCD chaiwo ekuisa. Chengetedzo yepamhepo, mabhapu, uye chengetedzo zvakauya pasina imwe mari. Zvaive zvakare nyore kuita kuti software igadziriswe uye inogara ichigadziridzwa kune yazvino vhezheni.
Sebhonasi, pachinzvimbo chekutumira maemail kana kutumira tsamba nemaoko tinogona kugovera mishumo zviri nyore neakaunti yedu yekunze.
Kuwedzera kune yedu accounting software, isu takatamisawo emakambani email masevhisi kune gore. Zvakare mutengo waive wakakonzera, asi fomula yacho yaive yakaoma.
Panguva iyoyo, isu takachengeta yemuviri Exchange server mune inodzorwa nemamiriro ekunze server kamuri. Mitengo yaisanganisira air conditioning, simba uye backup power systems. Isu takakwanisa network, chengetedzo, sevha, inoshanda sisitimu, inoshanda dhairekitori uye shanduko server software. Muchidimbu, vashandi vedu vemukati vaifanira kuveza nguva kubva kumabasa avo makuru uye hunyanzvi hwekugona kubata yakazara stack. Mukuenda kuGoogle bhizinesi email takakwanisa kuburitsa hardware, software, chengetedzo, networking, kugadzirisa uye kusimudzira.
Chinonyanya kukosha: yakakosha mari yekuchengetedza muhardware, kuchengetedza nzvimbo yemuviri, simba, uyezve, nguva yakatsaurirwa nevashandi vemukati yekugadzirisa software uye chitupa manejimendi. Ongororo yedu panguva iyoyo - uye nhoroondo kubvira - yaive yekuti zvaive zvine musoro "kurenda" pane kutenga.
Kana iwe usina yakakura yakazvitsaurira IT timu, ruzivo rwako runogona kunge rwakafanana.
Sezvauri kuona, sevhisi yega yega ndeye stack: accounting, email, uye mune iyi kesi, sosi kodhi repository. Nekuti isu tiri kambani yekuvandudza software, isu tinochengetedza yakachengeteka repository yekodhi yatinogovana pakati pevagadziri. Takasarudza kutara muganhu zvemukati nekunze mune imwe nzvimbo yakasiyana pane mamwe maviri maapplication; ne "mukati" zviri izvo isu tine basa nazvo sekambani, uye "zvekunze" zviri izvo izvo vatengesi vedu vane basa nazvo.
Muchiitiko ichi, takasarudza kufambisa chete hardware kune gore. Chinhu chedu chikuru chekusarudza chaive masimba. Isu tine hunyanzvi hwemukati hwekuchengetedza iyo software yekuchengetera. Isu tinotarisira kuwana uye kuchengetedzeka. Isu tinogadzirisa zvedu backups uye kudzoreredza njodzi. Isu tinodzora zvese kunze kweiyo midziyo. Amazon inotipa tembiricha inodzorwa, isingaite, yakavimbika simba, chaiyo hardware ine yakavimbiswa uptime. Ndizvo Zvivakwa-se-se-Service (IaaS).
Kunze kwevanhu vedu, chinhu chatinonyanya kukoshesa mukati mesangano redu ndechedu digital assets. Nekuti izvi ethereal assets zvakakosha, unogona kuita nyaya yekutidaidza kuti paranoid. Kana kuti, pamwe kungova kungwarira uye kungwarira zvakanyanya. Chero zvazvingaitika, tinoedza kuita zvatinoita zvakanaka uye kugara mukati mehunyanzvi hwedu uye kubhadhara mumwe munhu kuti aite izvo zvaanoita zvakanaka - ndiko kuti, kuchengetedza zvivakwa. Nekuti zvinhu izvi zvakakoshesesa kwatiri, tinovimba isu chete kuti tichazvibata.
Nokuti bhizimisi guru Motio iri mukugadzira software, isu tinofanirwawo kusarudza nguva yekuisa mari mukuedza kwekusimudzira kufambisa masoftware edu kune gore. Zvichida zviri pachena, izvi zvinotungamirirwa nemusika. Kana vatengi vedu vachida Motio software iri mugore, saka ndicho chikonzero chakanaka. The key driving force for MotioCI Mhepo yaidiwa imwe mutengo wakaderera kune yakazara-inoratidzirwa MotioCI software. Mune mamwe mazwi, nzvimbo yekupinda yakaderera kune iyo Software-se-sebasa (SaaS), asi chimiro chakaiswa chaive chishoma. Izvi zvakanakira masangano madiki asina zvivakwa kana hunyanzvi hwekuchengetedza imba MotioCI pane server yemukati.
MotioCI Mhepo inoiswa sehama mudiki kusvika pazere MotioCI application. Inogona kupihwa nekukurumidza, ichiita kuti ive yakakwana kune maPOC kana mapurojekiti enguva pfupi. Zvakakosha, inogona kuve yakakwana kune masangano asina yakazvipira IT timu. Zvakafanana nenhaurirano yedu pane sosi kodhi pamusoro, imwe kukanganisika iwe yaunoita iri kutonga. Nechero Software-se-a-Sevhisi iwe unovimba nemutengesi kuti uwane kune iyo underbelly kana izvo zvichidikanwa. In Motio's case, isu tinoshandisa Amazon gore kuti tipe zvivakwa zvatinoshandisa kumusoro software. Saka, iyo SLAs inotsamira pane isina kusimba link. Amazon inopa chiyero chechitendero SLA kuchengetedza pamwedzi uptime weinenge 99.99%. Izvi zvinoshanda kusvika kumaminetsi mana nehafu yenguva isina kurongwa yekudzika. MotioCI Kuwanikwa kweMhepo kunoenderana nenguva yeAmazon.
Chimwe chinhu chataifanira kufunga nezvokutama MotioCI gore kwaiva kuita. Kuita hakuuyi zvakachipa. Kupfuura iyo inoshanda kodhi pachayo, kuita kunoenderana nezvose zviri zviviri zvivakwa uye pombi. Amazon, kana mutengesi wegore, inogona kugara ichikanda mamwe maCPU ekuwedzera pakushandisa, asi pane imwe nzvimbo iyo kuita kunodzikiswa netiweki pachayo uye kubatana pakati penzvimbo yemutengi uye gore. Tichishandisa makore masevhisi takakwanisa kugadzira uye kupa inodhura inoshanda, inoita mhinduro.
Iwe unogona kunge usiri muindasitiri yekuvandudza software, asi zvingangoita kuti uchasangana nezvakawanda zvezvisarudzo zvakafanana. Tinofanira kutamira mugore rini? Ndeapi masevhisi atinogona kutora mukana mumakore? Chii chakakosha uye kutonga kupi kwatinoda kurega? Kudzora kushoma kunoreva kuti wako mutengesi wegore anozobata yakawanda yehardware uye software sevhisi. Kazhinji, nehurongwa uhwu, pachava nemaitiro mashoma, ma-add-ons, mashoma akananga kuwana kune iyo faira system kana matanda. Kana iwe uchingoshandisa application - senge yedu accounting software iri mugore - ungasade iyi yakaderera-level yekuwana. Kana iwe uri kugadzira application yekumhanya mugore iwe unozoda kuwana kusvika kune yakawanda sezvaungagone kuisa maoko ako pamusoro. Pane kusingaperi kushandiswa zviitiko pakati. Ndezvekuti ndeapi mabhatani aunoda kusundira wega.
Ehe, kuchengetedza kutonga kwakazara kweIT yako zvivakwa inogara iri sarudzo, asi zvichave zvichidhura kuzvichengeta zvese zviri mumba. Kana mari isiri chinhu, kana kuti kuiisa neimwe nzira, kana iwe uchikoshesa kutonga kwakazara kupfuura zvazvichadhura kumisikidza, kuisa, kugadzirisa, kuchengetedza, software, hardware, network, nzvimbo yemuviri, simba uye zvichengetedze zvese zvakagadziridzwa. , ipapo iwe ungangoda kumisikidza yako wega gore uye uitungamirire mumba. Pakureruka kwayo, gore rakazvimiririra, zvakanyanya, nzvimbo yedata munzvimbo inodzorwa yedata rakajeka. Kune rimwe divi re equation, zvakadaro, inyaya yekuti zvakaoma kuramba uchikwikwidza kana uri kutonga zvinhu zviri kunze kwehunyanzvi hwako. Simbisa bhizinesi rako uye ita izvo zvaunoita zvakanyanya.
Kutaura zvazviri, ndiwo mubvunzo wekare wekuti ndotenga here, kana kuti ndorenda? Kana iwe uine mari yekubhadhara mari, nguva uye hunyanzvi hwekuzvibata, kazhinji zviri nani kutenga. Kana, kune rimwe divi, iwe ungada kushandisa nguva yako uchimhanyisa bhizinesi rako uye kuita mari, zvingaite zvine musoro kubudisira hardware nemasevhisi kune wako wegore mutengesi.
Kana uchida Motio, unogona kusarudza kuti zvine musoro kuve nekumwe kusanganiswa kwezviri pamusoro nekuchengetedza kudzora kwaunoda uye nekusimudzira makore ezvivakwa uye masevhisi kwavanogona kuwedzera kukosha kwakanyanya. Isu takadzidza zvakare kuti kuenda kumakore ishoma chiitiko uye yakawanda rwendo. Tinoziva kuti isu tiri chikamu chenzira ipapo.